गर्भवती महिलालाई वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतमका २२ सुझाव - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ महिला/बाल स्वास्थ्य ∕ गर्भवती महिलालाई वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतमका २२ सुझाव
डा. जागेश्वर गौतम सोमबार, २०७६ कात्तिक १८ गते, ११:०७ मा प्रकाशित
गर्भवती हुनु आफैमा एक संवेदनशील र महत्वपूर्ण कुरा हो । सर्वप्रथम कुनै पनि महिलाले गर्भ बोक्नु भनेको के हो त्यो बुझ्न आवश्यक हुन्छ । गर्भवती हुनु एक प्राणबाट अर्काे प्राणलाई जीवन दिनु आफैमा अद्भुतमय तथा आनन्दको पाटो हो । प्राकृतिक रुपमा नै यो देन महिलाहरुलाई प्राप्त छ । त्यही कारण महिलाहरु पुरुषको तुलनामा पृथक छन् ।
महिलाको जीवनमा गर्भावस्थालाई सबभन्दा महत्वपूर्ण अवस्था मानिन्छ । कुनै पनि महिला गर्भवती भई शिशुलाई जन्म दिने प्रक्रिया प्रक्रिया जति आनन्दमय छ, त्यति नै जटिल पनि । गर्भवती हुँदाका दौरानमा महिलाको पाठेघरमा शिशुको विकास हुने भएकोले यस समयमा महिलाको स्वास्थ्य अवस्था तुलनात्मक रुपमा अन्य समयको भन्दा बढी संवेदनशील र कमजोर हुन्छ । त्यसकारण यो अवस्थामा महिलाको स्याहार र सुरक्षाको विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।
१) सर्वप्रथम कुनै पनि महिला आफ्नै स्वइच्छाले गर्भवती भएको हुनुपर्छ ।
१४) प्रेस बढ्ने, शरीर सुन्निने, ज्वरो आएमा, रगत वा पानी बगेको खण्डमा तुरुन्त चिकित्सकको सरसल्लाह लिने ।
शिशुलाई जन्म दिने समय वा जन्म दिइसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुः
२१. सुत्केरी अवस्थाको ६ हप्तासम्म गह्रौ सामान नउचाल्ने